Tale jeneralin’ny tahirim-bola iraisam-pirenena : « Hita sy tsapa ny fandrosoan’i Madagasikara » -
AccueilRaharaham-pirenenaTale jeneralin’ny tahirim-bola iraisam-pirenena : « Hita sy tsapa ny fandrosoan’i Madagasikara »
09/07/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nahitana tombontsoa goavana ho an’ny firenena ny dian’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tany Frantsa farany teo mahakasika ny tontolo ara-toe-karena, satria dia nahafahany nihaona tamina tompon’andraikitra maro izany amin’ ny maha vahiny nasaina manokana azy ihany koa. Nandritra ny dian’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tany Aix –en-Provence(Frantsa) nanatrika ny andiany faha-18 amin’ ny fihaonana ara-ekonomika nokarakarain’ny fivondronan’ireo mpahay toe-karena izao no nihaonany tamin’ny tale jeneralin’ny tahirim-bola iraisam-pirenena FMI Christine Lagarde izay nanatrika tany an-toerana, ity farany izay nilaza ny fahatsapany ny fandrosoan’ i Madagasikara. Nambaran’ ny tale jeneralin’ny FMI ihany koa manaraka izany ny fahatokisan’izy ireo ny tompon’andraikitra sy ny fitondram-panjakana malagasy manoloana ny ezaka tanterahina manomboka eny ifotony, izay herin’ny fampandrosoana maharitra sy ny fampihenana ny fahantrana. Ankoatra ny tale jeneralin’ny FMI dia nihaona tamin’ ireo tompon’andraikitra frantsay izay mampiasa vola eto Madagasikara ihany koa ny filoham-pirenena malagasy. Anisan’ izany ny filohan’ ny TOTAL Patrick Pouyanné, filohan’ ny seranam-piaramanidina Paris Augustin de Romanet ary ny filohan’ny tahirim-bola MERIDIAM Thierry Deau.
Nandritra ireo fihaonana nisesy ireo no nanambaran’ny filoha Hery Rajaonarimampianina fa
“ravo amin’ny nahafahan’ i Madagasikara nandray anjara tamin’ ny fihaonana. Zava-dehibe ny fijerena sy hampiharana ny vokatry ny resaka atao eto manoloana ny zava-misy amin’ireo firenena maro maneran-tany tahaka an’i Madagasikara. Adidiko izany amin’ ny maha ray aman-dreny ahy ao amin’ ny firenena , ary amin’ny maha vahiny nasaina manokana ahy , izay hitondrako ny feon’ ny vahoaka anatin’ izao fihaonana manan-danja izao” hoy hatrany ny filoham-pirenena malagasy. Amin’ ny maha vahiny manokana ny filoha mandritra ny fihaonana moa dia nisy anjara fandraisam-pitenenana manoloana ny fivoriana omaly alahady, izay anatin’ ny lohahevitra hoe “ ireo fanovana eo amin’ izao tontolo izao” . Nandritra ity dian’ ny filoham-pirenena tany frantsa ity ihany koa no nitafany tamin’ ireo mpila ravinahitra any an-toerana , ny mikasika ny fifidianana sy ny ezaka nametrahana ny fitoniana, ary ireo paika napetraka nahafahana tonga amin’ny fampivoarana ny toe-karena amin’ny alalan’ny fanamafisana ny ezaka fampandrosoana. Natsidiky ny Filoha ihany koa nandritra ny fihaonany sy ireo Malagasy any Frantsa ny toe-tsain’ny fisandratana dia ny fampivoarana ekonomika sy ny fiovana ara-tsaina.
Efa sasatry ny miaina. Raha iny avy nampandry adrisa ny vahoakan’Ambatondrazaka iny ny Filoha teo aloha sady filoha nasionalin’ny antoko Tim, Marc Ravalomanana dia namory ireo mpanara-dia taminy indray ny tenany omaly. Tamin’izany indrindra no ...Tohiny